Ukutya okuneAlkaline -Ukulandela njani ukuze wehlise ubunzima kuyasebenza | Ukutya kukaNutri
USergio Gallego | | Ukutya, Isibonelelo sokutya
Namhlanje kukho iindlela ezininzi zokutya ukunciphisa umzimba, ezinye azinampilo kwaye ziyingozi empilweni kwaye ezinye zichasene noko kukunceda ukunciphisa umzimba ngendlela efanelekileyo nesempilweni. Ngeli xesha ndizakuthetha nawe malunga ukutya kwealkali, ekhusela ukuba uninzi lwezifo ezenzeka namhlanje zibangelwa kukungatyi kakuhle kwaye amanqanaba aphezulu obumuncu okusemzimbeni. Ngale ndlela, esi sicwangciso sokulahleka kobunzima sicebisa ukutya uthotho lokutya okuneqondo eliphezulu le-alkalinity, elinceda ukunciphisa iqondo leasidi eveliswa kukunye ukutya.
1 Inqanaba le-pH emzimbeni
2 Ukutya kwealkali
3 Ukutya okune-acid
4 Izinto eziluncedo zokutya kwealkali
5 Iingxaki zokutya kwe-alkaline
6 Iingcebiso kunye nezikhokelo xa uqala ukutya kwealkaline
7 Ezinye izinto ezinceda ukulinganisa i-pH egazini
Inqanaba le-pH emzimbeni
Inqanaba le-pH lisetyenziselwa ukulinganisa ukuba umzimba une-asidi kangakanani. Inkqubo ye- inqanaba eliqhelekileyo le-pH egazini imalunga ne-7,5. Ukutya okunesondlo kubalulekile ukuba ube namanqanaba amahle e-pH kwaye ke kuthintele ukuvela kwezifo ezahlukeneyo. Ukutya okune-alkaline kufuna ukuba i-pH egazini yanele kunye nezithembiso zokulahleka kobunzima, impilo elungileyo yethambo kunye nokuthintela izifo ezahlukeneyo ezibangelwa yinqanaba eliphezulu leasidi.
Abo baziwa njengokutya kwealkali ityebile kwizimbiwa ezifana nesodium, calcium, potassium kunye nemagnesium. Ukutya okune-alkaline kukhuthaza ukutya okufanelekileyo ngokusekwe kolu luhlu lokutya. Ngale ndlela kuya kufuneka ubandakanye kwisidlo sakho semihla ngemihla iziqhamo kunye nemifuno Njenge-broccoli, i-asparagus, i-zucchini, iitumato, okanye iavokhado. Kananjalo abanakuba belahlekile amandongomane njengamandongomane okanye iiamangile kunye imifuno njengee-chickpeas okanye iilentile.
Ukusetyenziswa kokutya okune-asidi kubalulekile ukufezekisa inqanaba le-pH elungileyo egazini. Zizityebi kwizimbiwa ezifana ne-phosphorus, i-iron kunye ne-iodine kwaye zingafumaneka kwi Inyama ebomvu, kwi ukutya kwaselwandlekwi iimveliso zederi okanye kwiswekile ecoliweyo.
Izinto eziluncedo zokutya kwealkali
Kukutya oku ikhuthaza ukutya okusempilweni isekelwe kukutya okunesondlo okunje ngeziqhamo, imifuno okanye amandongomane. Ukongeza koku, kuthintela ukutyiwa kwamafutha, utywala okanye iswekile.
Landela olu hlobo lwesicwangciso sokulahleka kobunzima uya kumnceda umntu aphalaze iiponti ezingaphezulu ngendlela esempilweni nesebenzayo ngokupheleleyo. Ngokwenxalenye yayo, ukusetyenziswa kokutya okuneasidi kunye nealkali kuyanceda ukunciphisa umzimba ngendlela efanelekileyo.
Ezinye izibonelelo zokutya kwealkali yile Uthintelo lwezifo ezinokwenzeka ezifana nesifo samathambo, Kwandisa amandla emzimbeni okanye kunceda ukunciphisa inqanaba loxinzelelo emntwini.
Iingxaki zokutya kwe-alkaline
Njengakwindlela ezininzi zokutya, ngaphambi kokuqala ukutya kwealkaline kuyacetyiswa ukuba uye kwingcali yesondlo ukuvavanya ukuba ngaba urhulumente kufanelekile ukulandela okanye kungcono ukuqala ngolunye uhlobo lokutya. Ugqirha Kuya kufuneka wenze iimvavanyo ukujonga inqanaba le-pH egazini kwaye uyazi ukuba ufuna ukutya ukutya okune asidi kunye nealkali. Kwimeko apho unesifo seswekile, akucetyiswa ukuba ulandele olu hlobo lokutya njengoko inokutshintsha impilo yakho.
Iingcebiso kunye nezikhokelo xa uqala ukutya kwealkaline
Abo bakhusela ukutya kwe-alkaline, bakhuthaza ukuba ibhalansi ye-pH yenza ukuba inkumbulo iphucule kakhulu, oko umzimba unamandla ngakumbi kwaye i umgangatho wokulala uphezulu kakhulu. Nangona kunjalo, luhlobo lokutya ongenakuqala ngokwakho kuba kuyacetyiswa ukuba uqale ngokuya kwisondlo oza kukujonga kwaye akuxelele ukuba kufanelekile ukuqala ukutya okunjalo.
Okulandelayo ndiza kukunika umzekelo wento enokuba yimenyu yemihla ngemihla yesalkaline yokutya ukuze uqaphele kwaye wenze eyakho imenyu.
Ngexesha lesidlo sakusasa ungakhetha ukuba ne ijusi eyenziwe ngemifuno neziqhamo.
Malunga nentsasa elandelayo unokufumana iiglasi zamanzi nge isiqwenga sesiqhamo.
Ngexesha lesidlo sasemini ungenza ipleyiti yemifuno eluhlaza. Ungadibanisa esi sidlo kunye nesidudu esithile okanye ezinye iimbotyi kuba kufanelekile ukuba uthathe iiproteni ezinemvelaphi yemifuno.
Ukutya okulula unokufumana ukumiliselwa okanye isiqwenga sesiqhamo.
Ngokuphathelele isidlo sangokuhlwa, kungcono ukhethe iikhalori ezisezantsi kunye nezitya ezilula ezinje imifuno eyosiweyo okanye i-oatmeal nezinye iziqhamo.
Ezinye izinto ezinceda ukulinganisa i-pH egazini
Ngaphandle kokutya kwealkali kukho olunye uthotho lwezinto ezinokukunceda ulungelelanise i-pH egazini kwaye uphephe iingxaki zempilo ezizayo.
Yenza intwana ye ukwenza umthambo rhoqo Inceda imetabolism ukuba isebenze ngokuqhubekayo kwaye ngale ndlela inokuphelisa ukungcola kunye neetyhefu ezisemzimbeni kwaye kunokubangela ukuba i-pH inyuke kakhulu.
Kubalulekile ukucoca umzimba amaxesha ngamaxesha. Ukwenza oku, ukongeza kumanzi okusela onokwenza uhlobo iziselo diuretic ezinceda ukucoca umzimba ngaphakathi kunye nokuphelisa iityhefu.
Ukuba ufuna ukuba nebhalansi ethile emzimbeni kubalulekile ukuba ufumane u-a ukulinganisela kwinqanaba leemvakalelo. Ukuba uyakwazi ukudibanisa ingqondo nomzimba awuyi kuba nangxaki yeasidi emzimbeni enokubangela iingxaki kwixesha elizayo.
Njengoko ubona, ukutya kwealkaline ayinakuthathwa njengokutya okungummangaliso kuba awufuni ukunciphisa umzimba ngokugqithileyo ngexesha elifutshane kangangoko kunokwenzeka. Kukwangqinwa ukuba inesiphumo sokubuyela kumntu ogqiba ekubeni ayilandele. Ngayiphi na imeko, njengoko kusoloko kusenzeka xa uqala ukutya okuthile, kuyacetyiswa ukuba ubonane nengcali eya kukucebisa ukuba kufanelekile ukuyilandela okanye akunjalo.
Emva koko ndiza kukushiya ividiyo echazayo ukuze icace kuwe yintoni ukutya kwealkali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Ukutya » Ukutya kwealkali
Uyonyusa njani iferritin ngokwendalo?
Kutheni le nto ngamanye amaxesha kungenakwenzeka ukuphelisa amanqatha esisu ngokusebenza?